ကတ်နဲ့ ကျွန်မ ဒီအလုပ်ကို ၀င်ကြတာ သိပ်မကွာ။ ကတ်က ကျွန်မထက် ၂ ပတ်စောသည်။ ကျွန်မနဲ့အလုပ်ဝင်တာ same batch လို့ ပြောလို့ ရသည်က မလေးရှားတရုတ်လူမျိုး ကတ်ရယ်၊ စင်္ကာပူမလေးရှားလူမျိုး ဆန်နီရယ်ပေါ့။ ကတ်က အတော်ရုပ်ဖြောင့်ပြီး သဘောကောင်းသည်။ ဆန်နီကလဲ အသားတော်တော်လတ်ပြီး သွားတက်လေးတွေနှင့် မျက်နှာချိုသည်။ သူတို့ ၂ယောက်လုံး ကျွန်မထက်ငယ်ကြတော့ ကျွန်မမောင်လေး ၂ယောက် ကောက်ရသလိုပင်။
ဆန်နီက တခါတလေ ကလေးဆန်ပြီး ကတ်က လူကြီးဆန်သည်။ အဲဒီတုန်းက ကတ်ရော၊ ကျွန်မရော ချစ်သူတွေ ကိုယ်စီနှင့် မကြာခင် လက်ထပ်ဖို့စီစဉ်ထားကြသည်။ ကတ်ကောင်မလေးက ကတ်လို ရုပ်လေးသန့် ပြီး တော်တော်ချစ်ဖို့ ကောင်းသည်။ အရမ်းလိုက်သည့် အတွဲပါ။ ကတ်က ကျွန်မဆရာဆိုလဲ မမှား။ ကျွန်မ အစိမ်းသက်သက် ၀င်လာသည့် နယ်မြေအသစ်ထဲမှာ သူက ကျွန်မကို တွဲခေါ်ခဲ့သူ။ သူလို့ သူငယ်ချင်းမျိုးရတာ အရမ်းကံကောင်းပါသည်။ ပြီးတော့ အထာလဲသိပ်မရှိ။ ပွင့်လင်းသည်။ အားနာတတ်သည်။ နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပေမယ့် ပေါင်းလို့ ကောင်းသည်။
ကတ်က ကျွန်မထက် အရင်မင်္ဂလာဆောင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်မက အိမ်ထောင်ပြုဖို့မိဘတွေနှင့် အတော်လေး နားလည်မှုယူရတာက အစ သူ့ နဲ့ တိုင်ပင်ဖြစ်သည်။ အလုပ်ထဲက အခက်အခဲ၊ ဆက်ဆံရေး အကုန် ကတ်နဲ့ ကျွန်မ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း တိုင်ပင်ဖော်။ ကျွန်မက တခြားအုပ်စုရောက်သွားတော့ ကတ်နဲ့အရင်ကလောက် စကားပြောဖို့အချိန်မရ။ တခါတလေတော့ ထမင်းအတူစားရင်း စကားတွေ ပြောဖြစ်သည်။ ကျွန်မ အိမ်ထောင်ကျပြီး တနှစ်လောက်ကြာတော့ ကတ်သားဦးလေးမွေးသည်။ နောင် တနှစ်လောက်ကြာတော့ ကျွန်မက သားဦးလေးမွေးသည်။ ကတ်နဲ့ ကျွန်မ ကလေးတွေ အကြောင်းတိုင်ပင်ဖြစ်ပြန်သည်။ အဲဒီအထိ ကတ်က တာဝန်ကျေ၊ သစ္စာရှိသော ဖခင်ကောင်း၊ ခင်ပွန်းကောင်းဖြစ်နေခဲ့သည်။ ၀မ်ဒီဆိုသည့် မိန်းမတယောက် သူ့ ဘ၀ထဲ မ၀င်လာသည်အထိပေါ့။
တကယ်တော့ ၀မ်ဒီက ကျွန်မတို့ ထက် စောပြီး ဒီအလုပ်မှာရှိနေခဲ့ပြီးသား။ ကျွန်မ အလုပ်ဝင်ကာစ ကတည်းက အိန္ဒြာကျော်ဇင်နဲ့နဲနဲဆင်တဲ့ ၀မ်ဒီ့ကို သတိထားခဲ့မိသည်။ သူက အိန္ဒြာကျော်ဇင်လောက်တော့ မလှပါ။ သူက သူများထက် ဖက်ရှင်ကျကျ ၀တ်တတ်သည်။ ကတ်လို မလေးရှားတရုတ်လူမျိုးဖြစ်ပေမယ့် ဒီမှာပေါက်သည့် စလုံးမလေးအတိုင်း။ စကားပြောသွက်ပြီး အမြဲပြုံးနေတတ်ပေမယ့် မရိုးသားတဲ့ မျက်လုံးတွေရှိလို့ ကျွန်မသူ့ ကို မချစ်ပါ။ အသားနဲနဲဖြူသည့် အိန္ဒိယလူမျိုးများကိုသာ စကားပြောတတ်ပြီး အသားမဲသူတွေကို မတူမတန်သလို အဖက်မလုပ်တတ်သောကြောင့် ကျွန်မသူငယ်ချင်းကုလားမလေးက သူ့ ကို အလွန်မုန်းသည်။
ကျွန်မနဲ့ သူ အုပ်စုတူသွားတော့ မချစ်သော်လည်း အောင့်ကာနမ်းရသည်။ အဲဒီတော့မှ သူ့ အကြောင်းကို သေချာသိရသည်။ တလလျှင် ဒေါ်လာသောင်းကျော်ဝင်သော ခင်ပွန်းနှင့် ပိုက်ဆံအလွန်ရှိသော ယောက္ခမကြီးက သူ့ ကို အလွန်အလိုလိုက်သည်။ သန်းချီတန်သော အိမ်မှာ အခြွေအရံတွေနှင့်။ ဒါကြောင့် အလုပ်ခွင်မှာ တခါတလေ တရားလက်လွတ် စကားပြောတတ်သည်။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် အများစုက သူ့ ကို မချစ်ကြ။ သားလေးမွေးပြီးနောက်မှ သူ့ ဝတ်စားဆင်ယင်ပုံက နဲနဲ လွန်လာသည်။ လည်ပင်းဟိုက်လွန်းသော အကျီင်္၊ တိုလွန်းသောစကပ်တွေနှင့် သူ့ ကို အနောက်တိုင်းဆန်သည့် ဌါနကအကြီးဆုံးက ဌါနရဲ့ ကွင်းဘွဲ့ တောင် ပေးလိုက်သေးသည်။
သူက လည်သည်။ အထက်ဖား အောက်ဖိတတ်သည်။ စကားတွေ အရောင်ပြောင်းတတ်သည်။ ကျွန်မရော စင်္ကာပူလူမျိုး ကျွန်မသူငယ်ချင်း ၂ယောက်ပါ သူ့ ကို အတော်သတိထားရသည်။ ကျွန်မတို့ကိုယ့်အလုပ်နဲ့ ကိုယ် ရှုပ်နေချိန်မှာ ဘယ်အချိန်က ဘယ်လို သူက ကတ်နှင့် အတော်ရင်းနှီးသွားသည် မသိလိုက်။ ကတ်မိန်းမ ဒုတိယကိုယ်ဝန်ရှိပြီး မအောင်မြင်တော့ ကျွန်မကတ်ကို အားပေးရင်း ကတ်အနားမှာ ကလက်တက်တက် အပြူံးနဲ့အချိန်တော်တော်များများရှိနေတတ်တဲ့ ၀မ်ဒီ့ကို သတိထားမိခဲ့သည်။ စိတ်ထဲမှာ တခုခုကို စိုးရိမ်မိပေမယ့် မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့ပြန်ဖြေတွေးတွေးခဲ့သည်။
ကတ်အမျိုးသမီး နောက်ထပ်ကိုယ်ဝန်ရှိပြီး ဒီတခါကိုယ်ဝန်ကို ဂရုစိုက်ချင်လို့ကိုယ်ဝန် ၆ လနဲ့ မလေးရှား ပြန်သွားပြီး မလေးရှားမှာ မွေးတဲ့ထိနေမယ်လို့ကတ်လာပြောတော့ နင်ပါခွင့်ယူပြီးလိုက်သွားပါလားလို့ကျွန်မက မျက်စိမှိတ်ပြီး တိုက်တွန်းခဲ့သေးသည်။ အဲဒီလို မလုပ်သင့်မှန်းသိသိနဲ့ ပေါ့။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ကတ်စားပွဲနံဘေးမှာ အကြောင်းမရှိ အကြောင်းရှာ ခဏခဏတွေ့ ရတတ်တဲ့ ၀မ်ဒီကြောင့်ပါ။ မိန်းမမရှိတာနဲ့အလွယ်တကူ ဖောက်ပြန်တတ်သူထဲ ကတ်မပါနိုင်ဘူးလို့ကျွန်မက ကတ်ကို အထင်ကြီးမိခဲ့တာ။ တကယ်တော့ သူတို့ နှစ်ယောက်တူတူတက်ခဲ့တဲ့ မာစတာတန်းကလဲ အားပေးအားမြှောက်ပြုတဲ့ အကြောင်းရင်းပဲ ထင်ပါ့။
မူမမှန်တဲ့ ဆက်ဆံရေးကို ကျွန်မရိပ်မိလာတော့ ကတ်ကို မြန်မာဆန်ဆန် သွယ်ဝိုက်သော နည်းအားဖြင့် သတိပေးမိပါတယ်။ ကတ်က ကျွန်မရိပ်မိနေတာ သိတော့ ကျွန်မရှေ့ မှာ တတ်နိုင်သမျှ အနေအထိုင် ဆင်ခြင်ပေမယ့် ၀မ်ဒီကတော့ တဆိတ်ကဲလွန်းပါတယ်။ တခါတလေ ကျွန်မက ကတ်နဲ့အရင်လို စကားပြောရင်တောင် သူက မကျေနပ်တဲ့ မျက်လုံးတွေနဲ့လှမ်းလှမ်းကြည့်တဲ့ အခါ ကျွန်မ အသားတွေ တဆတ်ဆတ်တုန်တဲ့ အထိ ဒေါသထွက်ရပါတယ်။
ကတ်က မနက်တိုင်း ၀မ်ဒီ့်အတွက် မနက်စာဝယ်လာ၊ တခါတလေ ကတ်ကားမယူလာပဲ ၀မ်ဒီနဲ့ အတူလာတာ တွေ့ တဲ့အခါ ကိုယ်ဝန်ကြီးနဲ့ယောင်္ကျားကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာ မလေးရှားမှာရှိနေတဲ့ ကတ်အမျိုးသမီးလေး အကြောင်းတွေးပြီး ကျွန်မ အတော်စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရပါတယ်။ တဌါနအတူတူ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် အချို့ ကလဲ သူတို့ ဇာတ်လမ်းကို ရိပ်မိလာတဲ့အထိပါပဲ။ ဒီဇာတ်လမ်းကို ၀မ်ဒီစခဲ့တာ ဆိုတာ ကျွန်မကောင်းကောင်းကြီး သဘောပေါက်ခဲ့ပေမယ့် ဟိုးငယ်ငယ်လေး ကတည်းက ချစ်လာတဲ့ ကိုယ့်ဇနီးမရှိခင် ၄ ၅ ၆လလောက်ကလေးမှာ စိတ်မနိုင် ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ ကတ်ကို ကျွန်မ အတော်ကို အထင်သေးသွားမိပါတယ်။ စိတ်တိုလို့စကားကောင်းကောင်းတောင် မပြောခဲ့ပါဘူး။
၀မ်ဒီကတော့ အတော်ကျွမ်းကျင်ပါတယ်။ သူ့ ယောင်္ကျားကိုယ်တိုင် ဆင်ပေးတဲ့ အဖိုးတန်အကျီင်္တွေ ၀တ်ပြီး ကတ်နဲ့ လျှောက်လည်တတ်သေးတယ်။ နေ့ လည်ဘက်ဆို ယောက္ခမဆီ အသံချိုချိုလေးနဲ့ ခွျှဲ။ သူ့ အသံနားထောင်ပြီး ဒုတ်ကလေးနဲ့ခပ်စပ်စပ်သာ ရိုက်ချင်တော့တာ။ မိန်းမမွေးတော့ ကတ် မလေးရှားပြန်သွားတာ ကျွန်မဖြင့် စိတ်ချမ်းသာလိုက်တာ။ အဲဒီအချိန်ရောက်ပါစေလို့ဆုတောင်းနေရတာလေ။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မိန်းမလေးနဲ့ပြန်တွေ့ ရင် ကတ် ဆင်ခြင်ကောင်းပါရဲ့ပေါ့။
နောက်ပိုင်းမှာ ကတ်ကို ကြည့်ရတာ ထိုင်းထိုင်းမှိုင်းမှိုင်း။ အလုပ်ထဲလဲ သိပ်စိတ်မပါတော့ သူ့ အရာရှိနဲ့ လဲ အဆင်မပြေ။ တကယ်ဆို သူက သိပ်တော်တဲ့သူပါ။ မျက်နှာကြီးက သုန်သုန်မှုန်မှုန်နဲ့ ။ မရုန်းနိုင်တဲ့ နွံထဲမှာ အတော်ပိတ်မိပြီး မွန်းကြပ်နေသလို။ မာစတာတန်းလဲ ကျ။ သူ့ ပုံစံက လူတကာ ရိပ်မိစရာ။ ဟိုဘက်မှာလဲ အဖေရယ်၊အမေရယ်၊သားရယ် မိသားစုကလေး… ဒီဘက်မှာလဲ အဖေရယ်၊အမေရယ်၊ကလေးနှစ်ယောက်ရယ် မိသားစုလေး… ဘာမှမဟုတ်တဲ့ လူနှစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်သာယာမှုလိုက်ကြတာနဲ့အပြစ်မရှိတဲ့ မိသားစုလေး၂ခု မပြိုကွဲစေချင်ပါ။
အဲဒီကိစ္စဖြစ်ပြီး ကတည်းက လမ်းမှာတွေ့့ရင် အပြုံးလျော့လျော့ တခုသာ တုန့် ပြန်ဖြစ်ပြီး အရင်ကလို စကားမပြောဖြစ်တဲ့ ကျွန်မကို ကတ်က တိုင်ပင်စရာရှိလို့ လို့ ဆိုလာပါတယ်။ သူအလုပ်ထွက်တော့မယ်တဲ့။ သူ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကြားလိုက်တာ ကျွန်မ အတော်ဝမ်းသာသွားပါတယ်။ ဒီအလုပ်မှာ ဆက်နေရင် ဒီနွံမှာ ဆက်နစ်ဖို့ ပဲ ရှိတာမို့ ကျွန်မက သူ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အပြည့်အ၀ ထောက်ခံမိပါတယ်။ သူအလုပ်ရှာနေချိန်မှာ ကျွန်မ သူ့ ကို အရင်ကလို ပြန်ခေါ်ပြောဖြစ်ပါတယ်။ ရုန်းထွက်ဖို့ အလင်းရောင်လေးဆီ သွားခဲ့တဲ့သူ့ ကို စိတ်ဓါတ်အင်အားပေးတဲ့ သဘောပါ။ကတ် တကယ်ပဲရုန်းထွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူအလုပ်ရပြီးထွက်တော့မယ့် နောက်ဆုံးနေ့ က ကျွန်မ ငိုမိပါတယ်။ သူဟာ ကျွန်မအတွက် အစစ ကူညီခဲ့တဲ့ စိတ်ထားကောင်းတဲ့ သူငယ်ချင်းလေးပါ။
ယနေ့ ထက်ထိ ကတ်နဲ့ ကျွန်မ အဆက်အသွယ်ရှိဆဲ သူ့ မိသားစု ကိုယ့်မိသားစု အတွေ့ အကြုံ ဖလှယ်ကြဆဲ ပါ။ ကတ်မှာ ခုဆို နောက်ထပ် သမီးလေး တယောက်တောင် ရပြီး ကလေး ၃ယောက်ရဲ့ ဖေဖေကြီးဖြစ်နေပါပြီ။ တကယ်လို့ သာ စိတ်အလိုလိုက်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက် အမှားသာ ချလိုက်ရင် အပြစ်မဲ့တဲ့ ကလေးလေးတွေ အဖေတကွဲ အမေတကွဲ နေရတော့မှာလေ။ ခုတော့ သူ့ ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် မှန်ကန်မှုရလာဒ် စိတ်ချမ်းသာခြင်းကို သူကိုယ်တိုင် ခံစားနေရပြီလေ။
တကယ်တော့ မိန်းမဖြစ်ဖြစ် ယောင်္ကျားဖြစ်ဖြစ် အိမ်ထောင်ပြုပြီးတဲ့အခါ ကိုယ့်အတ္တ ကိုယ့်သာယာမှုထက် အိမ်ထောင်တည်မြဲမှုကို ပိုအလေးထားသင့်ပါတယ်။ ကလေးလေးတွေ ရှိလာပြီဆိုရင်တော့ ပိုလို့ တောင် သတိထားရမှာပါ။ မိဘတွေ ရွေးချယ်တဲ့လမ်းမှာ ရှင်သန်ခွင့်ရမယ့်ကလေးတွေရဲ့ နှလုံးသားနုနုလေးတွေ အနာတရ မဖြစ်အောင် ကိုယ့်အတ္တတွေကို မီးရှို့ပစ်ရမှာပါ။ ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ အလုပ်တခုဟာ ကိုယ့်မိသားစုကို ဘယ်လောက်ထိ နစ်နာထိခိုက်သွားနိုင်လဲ ဆိုတာ အရင်စဉ်းစားဆင်ခြင်သင့်ပါတယ်။ မိသားစုတိုင်း ငြိမ်းချမ်းသာယာ ခိုင်မြဲကြပါစေ။
Posted by တန်ခူး at 11:38 AM
ကတ်ကို လူတော် အဖြစ်သတ်မှတ်လို့ရတယ်။
အိမ်ထောင်ရေးဆိုတာ အမျိုးသမီးမှာရော အမျိုးသားမှာရော နားလည်ဖို့ သစ္စာရှိဖို့ လိုပါတယ်။အမ
အမရဲ့ ဒီလိုပို့စ်လေးကို အိမ်ထောင်ရှင်တွေ ဖတ်မိသိရှိပီး အတုယူနိုင်ကြါပါစေ..။
တလက်စတည်း စာရေးဆရာမ ဂျာနယ်ကျော်မမလေးရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးပညာပေး ဗညားရှိန်း ဝတ္တုကို ရှာဖတ်ကြပါလို့ အိမ်ထောင်ရှင်များစွာကို တိုက်တွန်းလိုပါတယ်..။
အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်တဲ့သူ တွေ လောကမှာ မရှိကြရင် သိပ်ကောင်းမှာပါပဲ..။
အမရဲ့ ဒီလိုပို့စ်လေးတွေဖတ်ပီး သတိသံဝေဂယူနိုင်ကြပါစေ..။
တန်ခူးရေးထားတာ ပို့စ်ကလေးက ကောင်းပါတယ်။
ယေဘုယျအားဖြင့် ယောင်္ကျားဖြစ်စေ၊ မိန်းမဖြစ်စေ အိမ်ထောင်ရေး ဖောက်ပြန်တာဟာ မကောင်းပါဘူး။ သားသမီး ရှိရှိ၊ မရှိရှိပေါ့လေ။
ဒါပေမယ့် တကယ်လို့ အိမ်ထောင်ဖက်နဲ့ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် အဆင်မပြေတော့ဘူးဆိုရင် ကွာရှင်းလိုက်ပြီးမှ အဲသည်နောက်ပိုင်းမှာ ချစ်သူအသစ်တွေ့လို့ ထပ်တွဲမျိုးကတော့ နားလည်ပေးလို့ရပါတယ်။ အိမ်ထောင်ကွဲရတာကလည်း အမှန်တကယ်တော့ မကောင်းတော့ မကောင်းဘူးပေါ့။ အထူးသဖြင့် ကလေးတွေရှိလာပြီဆိုရင် ကလေးတွေအတွက် မကောင်းဘူးပေါ့။
သို့သော်လည်း အိမ်ထောင်ရေးတိုင်းဟာ သာယာချမ်းမြေ့တဲ့၊ အောင်မြင်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးဖြစ်နိုင်ကြတာမဟုတ်လေတော့ မအောင်မြင်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကို အတင်းဆွဲစိ နေရတာဟာလည်း အဲသည်အိမ်ထောင်မှာ ပါဝင်တဲ့ လူသားနှစ်ယောက်စလုံးကို စိတ်ညစ်ညူးစေနိုင်ပါတယ်။ လူ့ဘ၀ဟာ တိုတိုလေး။ အဲသည်တိုတိုလေးမှာ နေ့စဉ်နှင့်အမျှ လူသားနှစ်ယောက်ဟာ တအိမ်ထဲနေပြီး တယောက်မျက်နှာ တယောက်မကြည့်ချင်လောက်အောင် စိတ်သဘောထားမတိုက်ဆိုင်တော့ဘူးဆိုရင် လမ်းခွဲလိုက်တာကမှာ သူ့တို့အတွက် ဖြေသာပါဦးမယ်။
တချိန်ကတော့ အရမ်းချစ်ခဲ့ကြတဲ့သူနှစ်ဦး ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် အိမ်ထောင်ရေးကျတော့ အချစ်တခုနဲ့တင် မပြီးပြည့်စုံဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ နားလည် သည်းခံခွင့်လွှတ်မှုတွေ လိုပါတယ်။ ချစ်ရင် နားလည် သည်းခံခွင့်လွှတ်တတ်ကြရမှာပေါ့လို့ အလွယ်တကူတွေးချင်ကြပေမယ့် တကယ့်တကယ်တန်းမှာ နှစ်ဖက်ဆွေမျိုး၊ ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအ၀ိုင်း၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး ၀ဲဂယက်တွေ၊ သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက် အတ္တတွေ၊ သည်းမခံနိုင်လောက်တဲ့ အသေးစိတ်အကျင့်စရိုက်တွေကို အနီးကပ်နှစ်ရှည်လများ ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာ အဲသည်အချစ်ဟာ မှေးမှိန်သွားပြီး နားလည်ခွင့်လွှတ်တတ်မှုဟာ လွင့်ပါးပျောက်ကွယ် သွားတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဖောက်ပြန်မှုမရှိသော်လည်း အဆင်မပြေတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးတွေဟာ ဒုနဲ့ဒေး ဖြစ်နေကြတာပါဘဲ။
ဒီတော့ ကျနော့်အမြင်ကတော့ အိမ်ထောင်ရေးပြိုကွဲတာသည် မကောင်းဘူးဆိုတာမှန်ပေမယ့် မအောင်မြင်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးတခုကို ကြိုးစားကြည့်လို့ မရနိုင်တော့ဘူးဆိုရင် စောစောစီးစီး လမ်းခွဲလိုက်တာက နှစ်ဦးစလုံးအတွက် ကောင်းသွားနိုင်တယ်လို့ စဉ်းစားမိပါတယ်။
ဟုတ်တယ်နော်.. ဟိုအမျိုးသမီးကတော့ သာယာမှုတစ်ခုအနေနဲ. အပျော်သဘောလောက် တွဲတာပဲဖြစ်မှာပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကတ်တစ်ယောက် သည် နွံထဲက ရုန်းထွက်နိုင်တာကိုပဲ တော်သေးတယ်လို. ပြောရမှာပဲနော်။ တဒင်္ဂပျော်ရွှင်မှုနောက် လိုက်မိရင် တစ်သက်လုံး ပတ်သက်တဲ.သူ အကုန်စိတ်ဆင်းရဲရမှာ...။
တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပညာပေး ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ တန်ခူးရေ...။ အရမ်းကောင်းပါတယ်...။
ဟုတ်တယ် မတန်ခူးရေ..... စိတ်အလိုလိုက်လို့ ကွဲကြတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးတွေ များလှပြီ... ကြားထဲက ကလေးတွေပဲ ဒုက္ခရောက်ကြရတယ်... အခုပဲ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ ပြောဖြစ်တယ်... သူလဲ ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့... သူ့ယောကျာ်း ဖောက်ပြန်လို့ ကွာရှင်းလိုက်ပြီတဲ့... သိပ်ဆိုးတာပဲနော်........
အိမ်ထောင်သည်တွေ ထိန်းသိမ်းသင့်တဲ့ စည်းပါပဲ။ ကိုယ်တယောက်တည်းရဲ့ သာယာမှုကိုပဲ မကြည့်ဘဲ ကိုယ့် ချစ်ဇနီး၊ သားသမီးတွေရဲ့ ခံစားချက်ကို စာနာတတ်ရင် ဒီအဖြစ်မျိုးတွေ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ကတ်က ထိန်းနိုင်တယ်ဆိုတော့ မဆိုးဘူးလို့ ဆိုရမှာပေါ့။
လောကဇာတ်ခုံထဲက ပုံပြင်မဟုတ်တဲ့ ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ပါပဲ။
စိတ်အလိုကို မလိုက်မိအောင် သတိချွန်းနဲ့ အုပ်ပေးရမယ်..
အမရေ အပြင်မှာ ဒုနဲ့ဒေးဗျ
အပြင်မှာ အခုလိုပုံပြင်တွေ ဘယ်လောက်များနေပြီလဲ ဘယ်လောက်ရှိနေပြီလဲလို့တောင် မတွေးရဲတော့ဘူး..
အမရေ သတိထားစရာအကြောင်းအရာလေးကို စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရေးပြတာ ဖတ်လို့တယ်။ အရင်နေ့က တခါဖတ်ပြီးပီ။ မအားလို့ခုမှထပ်လာလည်တာပါ။
ကောင်းလိုက်တာ အစ်မရယ်..အိမ်ထောင်မရှိပေမယ့် အိမ်ထောင်သည်တွေ ထိန်းသိမ်းသင့်တာလေးတွေဖတ်ပြီး သင်ခန်းစာယူသွားပါတယ်..
ဖတ်သူတိုင်းကို သတိပေးသလို...ကတ်ရဲ့ ဘေးကနေပြီး မိတ်ဆွေကောင်းပီသစွာ ကူညီခဲ့ တဲ့ 
လောကမှာတော့ ကတ်တွေ ၀င်ဒီတွေ အများကြီး မတန်ခူးရေ...။
လူကြီးတွေကဒါကြောင့်ပြောတာလေ။ အငွေ့ကိုရှောင်နိုင်တယ်၊ အတွေ့ကိုမရှောင်နိုင်ဘူးတဲ့။ သင်ခန်းစာယူဖို့ကောင်းပါတယ်။
မြတ်နိုးရေ… ဗညားရှိန်းကို အမ မဖတ်ဖူးသေးဘူး… ရှာဖတ်ဦးမှ…
ဟယ်… ဒီမမ ၂ ယောက်က ကော်မန့် ကို ညှိရေးထားသလား အောင့်မေ့တယ်… တပုံစံထဲ…
ကိုပေါရေ… ကိုပေါပြောသလို မပြေလည်တာကြီးကို အတင်းဆွဲစိတာ မကောင်းပါဘူး… ဒါပေမယ့် ခု… ကတ်တို့ ဇာတ်လမ်းက ကိုယ့်ဇနီးမယား လင်ယောင်္ကျားနဲ့ဘာပြဿနာမှ မရှိပါပဲ သာယာမှုကို မလွန်ဆန်နိုင်လို့ ဖြစ်ကြတာပါ…
ဟုတ်ပါတယ် မ ရယ်… တကယ်တော့ အဲဒီသာယာမှုနောက်က အကျိုးဆက်တွေက ပူလောင်စရာတွေချည်းပါပဲ…
ညီမရေ… အသိတွေထဲမှာကို ဒီသတင်းတွေက များများလာတယ်… ကလေးတွေ သိပ်သနားဖို့ ကောင်းပါတယ်…
ကျေးဇူးပါ sin dan lar ရေ… ဒါနဲ့ ညီမဘလော့ဂ်လိပ်စာလေးက ဘာလဲဟင်… အမရှာမတွေ့ လို့ ပါ…
ဟုတ်ပါတယ် ချိုသင်းရေ… အပြစ်မဲ့တဲ့ကလေးတွေကို လောကထဲ ဆွဲခေါ်လာပြီးမှ ကိုယ်လုပ်ချင်ရာကို မလုပ်သင့်ပါဘူး… ကတ်က ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်သွားတာပါ…
ပန်ရေ… တကယ့်လောက ဇာတ်ခုံထဲက တကယ့်လူသားစစ်စစ်တွေ ပါဝင်တဲ့ တကယ့်အဖြစ်အပျက်တခုပါ…
ကိုဇနိရေ… သတိချွန်းတဲ့လား… သိပ်ကောင်းတဲ့စကားလေးပါ…
ဟုတ်တယ်ရွာသားလေးရေ… ဒီခေတ်ကြီးမှာ တကယ့်ဒုနဲ့ ဒေး…
ပေါက်ရေ… အကုသိုလ်စိတ်တွေ ဖုန်းလွှမ်းသွားတာပေါ့ညီမရယ်… သိပ်ချမ်းသာသွားရင်လဲ ဖြစ်တတ်ကြတယ်… သိပ်ဆင်းရဲသွားရင်လဲ ဖြစ်တတ်ကြတယ်…
နုရေ… ဒါအမမျက်စိရှေ့ တင် အမနဲ့ အရမ်းရင်းနှီးတဲ့ သူတယောက် ဖြစ်သွားတဲ့ တကယ့် အဖြစ်အပျက်ပါ… ခုပြန်တွေးရင် ခုထိ အံ့သြမိနေတုန်းပဲ…
ကိုတက်တူရေ… မတွေ့ တာကြာပြီနော်…
ဟုတ်ပါတယ် kkရေ… ကတ်က အချိန်မှီလေး ရုန်းထွက်နိုင်ခဲ့တာ ချီးကျူးစရာပါ…
နိနိရေ… မတွေ့ တာကြာပြီနော်… စာတွေ ပိနေလားညီမ…
ကျေးဇူးပါလင်းဒီပရေ… နောင်လဲလာလည်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နော်…
ကိုသစ်နက်ဆူးရေ… ကတ်တွေ ၀င်ဒီတွေများဖတ်ပြီး ကတ်လို ရုန်းထွက်နိုင်လိုနိုင်ငြား ရေးမိတာပါ… ကိုယ့်အနားမှာ ကိုယ့်မျက်စိရှေ့ ဖြစ်သွားတာမိုလား…
မီယာရေ… ရှေးတုန်းက ရုပ်ရှင်လေး တကားတောင်ရှိခဲ့ဘူးတယ်… အတွေ့ တဲ့… ပညာပေးကားလေးပေါ့… ခုလိုလာလည်တာ ကျေးဇူးပါ… နောင်လဲလာလည်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်…
ကတ်ရဲ့ သားသမီးတွေ အင်မတန်ကံကောင်းကြပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ် ကိုတောင်ငူရေ… ကတ်ရဲ့ သားသမီးတွေ မိစုံဖစုံနေရတဲ့ ကံပါလို့ ပေါ့နော်